China Wet ground mica ntụ ntụ ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Huajing
Huajing plastic-ọkwa mica ntụ ntụ, nke a na-ejikarị eme ihe maka plastik injinia iji mee ka modul na-agbanwe na mgbanwe; Na mpempe akwụkwọ plastik nke ngwaahịa elektrọnik, mgbe ịtinye mica, ha nwere ike ịbụ nchikota nụchara anụcha na imewe. ọ nwere ike melite nguzogide ihu igwe nke ngwaahịa plastik, nke mere na plastik injinia nwere ike ịnagide ọnọdụ okpomọkụ na gburugburu ebe obibi ka ukwuu;
Wet Mica (Ihe eji arụ ọrụ)
Wet Mica （Ihe eji arụ ọrụ）
W-100 Ọla ọcha ＞ 82 125 ＞ 99.7 100 ＜ 0,5 4.5 ～ 5.5 7.8 MBA Pp 10ppm 0.22
W-200 Ọla ọcha ＞ 82 70 ＞ 99.7 100 ＜ 0,5 4.5 ～ 5.5 7.8 MBA Pp 10ppm 0.19
W-400 Ọla ọcha . 83 46 ＞ 99.7 100 ＜ 0,5 4.5 ～ 5.5 7.8 MBA Pp 10ppm 0.16
W-600 Ọla ọcha . 86 23 ＞ 99.7 100 ＜ 0,5 4.5 ～ 5.5 7.8 MBA Pp 10ppm 0.12
48.5 ~ 50% 30 ~ 34% 8.5 ~ 9.8% 0.6 ~ 0.7% 0,53 ~ 0,81% 0.4 ~ 0.6% 0.8 ~ 0.9% 1.5 ~ 4.5% 7.8
Main Ọrụ Of Mica
Huajing plastic-ọkwa mica ntụ ntụ, nke a na-ejikarị eme ihe maka plastik injinia iji mee ka modul na-agbanwe na mgbanwe; Na mpempe akwụkwọ plastik nke ngwaahịa elektrọnik, mgbe ịtinye mica, ha nwere ike ịbụ nchikota nụchara anụcha na imewe. ọ nwere ike melite nguzogide ihu igwe nke ngwaahịa plastik, nke mere na plastik injinia nwere ike ịnagide ọnọdụ okpomọkụ na gburugburu ebe obibi ka ukwuu; ọ na - eme ka mkpuchi ahụ dịkwuo mma iji hụ na ntụkwasị obi nke ọrụ eletriki dị elu; Ọ nwere ike ime ka mmiri ụfọdụ ngwaahịa plastik akọwapụtara nke ọma.
A na-eji ntụ ọka mica dị ọcha mee ka mmiri dị ọcha wee ghee mmiri dị ka ọkara, ya mere mmiri ntụ ntụ nwere àgwà ndị magburu onwe ha karịa ala-akọrọ, dị ka ọcha, ịdị mma dị mma, obere njupụta buru ibu, ọdịdị oge, nnukwu dayameta -to-ọkpụrụkpụ ruru na na.
Ngwa nke Mica na HDPE
Mgbakwunye nke mica na HDPE nwekwara ike belata permeability nke ihe, n'ihi ya, ọ kwesịrị ekwesị maka ịme ụdị ihe niile, dị ka tank mmanụ ụgbọala na ihe ndị ọzọ. Ngwongwo na-enweghị ụgbọ elu nke HDPE / mica composites na-abawanye nke ukwuu site na mmụba nke akụkụ akụkụ nke mpempe akwụkwọ mica, ebe modulu na-abụghị ụgbọelu na-ebelata ntakịrị. Ngwakọta HDPE jupụtara na ntụ ntụ mica nwere ezigbo akụrụngwa akụrụngwa. Site na mmụba nke mica ntụ ntụ, ike mgbatị ahụ, ịgbagọ ike na ekwe ntị modulus nke ihe ndị ahụ mejupụtara.
Ngwa nke Mica Powder na ABS
A na-ejikarị ABS eme ihe n'ụzọ ụgbọ ala, nkwukọrịta, ngwá electronic, nchebe mba na mpaghara ndị ọzọ. Mgbe ịtinye mica na plastik engineering ABS, ihe siri ike, nkwụsi ike na nkwụsi ike kemịkalụ nke ABS nwere ike ịka mma na ogo dị iche iche. Mgbe agbakwunyere 30% mica, e jiri ya tụnyere ABS dị ọcha, ọnụahịa mmepụta na-ebelata ihe dịka 20%, na ike na-ehulata na ike ike nke ihe a ka dị iche iche. Mgbe ọdịnaya nke mica dị 20%, modulus ekwe nke ihe a gbasara ihe dị ka okpukpu abụọ nke ezigbo ABS.